Fandefasana fehezam-boninkazo daisies sy tulip mavo "Mamiratra" any Mosko - Mandidy voninkazo
Fehezam-boninkazo daisy sy tulip mavo "Mamiratra"
40 cm ny sakany
Hahavony 40 cm
Fehezam-boninkazo amin'ny loko manga mavo-manga an'ny tulips 15 pcs, irises 12 pcs, chamomiles 8 miaraka amin'ny maitso haingon-trano ao anaty fonosana.
5650 Fehezam-boninkazo "Citrus Notes"
Fehezam-boninkazo misy daisy miisa 35 ary koa salalà misy haingon-trano.
7850 Fehezam-boninkazo laharana 452
Fehezam-boninkazo 27 peonies nafarana amin'ny taratasy kraft mpamorona.
10050 Fehezam-boninkazo peonies "Mey"
raozy spray 25, irises blue 36, pittosporum 1 fonosana, salal 1 fonosana, harona.
13450 Harona misy voninkazo "fasika mafana, ranomasina azure"
Fehezam-boninkazo mirehitra voninkazo peony 10 pcs, mattiola 13 pcs, lisianthus 11 pcs, alstroemeria 7 pcs, veronica 15 pcs, calla 6 pcs, hydrangea 3 pcs, salal 2 fonosana, fonosana.
20250 Fehezam-boninkazo "Madame Pompadour"
Vata satrok'i Aqua raozy 45 pcs.
6450 Vata misy raozy (45)